Nzira Yokuva RHCE Yakaiswa Sei?
Nzira yekuwana RHCE Certified
RHCE Vateereri: Ndeipi Unofanira Kuenda Kwayo?
Chii Chingave Wakakwanisa Kuita Mushure Mokuva RHCE Chakavimbiswa?
A RHCE (Red Hat Certified Engineer) chiyeuchidzo ndechimwe chiziviso chakakumbirwa uye chakakumbirwa pasi pose. RHCE inonyanya kureva Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) uyo ane huwandu hwekodzero uye unyanzvi hunofanirwa kusimbisa zvakananga mukuru mukuru wehurumende. RHCE yakaratidza kuti yakagadzirirwa inotarisira kutarisira nekushanda mifumo yeRud Hat Enterprise Linux iyo inonyanya kushandiswa kweLinux system yakagadzirirwa Red Hat. Iyi nzira yakasununguka uye yakasununguka ikozvino. Izvozvi hazvisi kushamisika kuti kuwana chirongwa cheRHCE kunoonekwa sechishanduko chinoitwa nevanyanzvi veTI. Izvo zvidzidzo maonero anovimbisa uye zvinogutsa zvakakwana. Pasinei nekuti, kuwana RHCE kunovimbisa kushandiswa kweRHCSA kutanga. Nzira yekuve yeRHCE yakavimbiswa sei?
Usati wawana RHCE chiziviso, munhu anofanira kusvika kuva RHCSA yakasimbiswa. Kudzidziswa kwakatemwa kunokonzerwa nemanzwiro ako emazuva ano. Vaya Windows admins avo vane ruzivo rwakanyanya rweLuxux vanofanira kuenda kuRaw Hat System Administration I uye II (RH124 neRH134) dzidzo uye Red Hat System Administration III (RH254) kudzidzira kugadzirira. Kana zvisiri dambudziko rakawandisa zvinosvika kune zvinyorwa pasi:
Windows system vatongi vanove neLinux shoma vasangana:
Linux kana vatungamiri veUNIX vanove nekwakapoteredza 1 kune makore 3 vane ruzivo:
Iwe unogona kugara pane chero nzira yekudzidzira iyo yakakodzera iwe iwe-classroom, pawebhu, kana paji yewebhu yako. Kune nheyo dzakawanda dzinopa RHCSA dzidzo dzokudzidzisa uye mamwe maitiro akabudirira.
Vaya RHCSA vakatsigira nyanzvi dzingada kuwana hukuru hwepamusoro-soro kuchengeta mupfungwa yekupedzisira chinangwa chekusimudzira kushevedzera kwavo kunofanira kuenda kuRHCE chiziviso. Iwe unogonawo kuwana RHCE yakavimbiswa pachiitiko chokuti iwe uri mukuru mukuru wehurumende yepamusoro asi iwe hauna kumbosimbiswa. Uyezve, pane mukana wekuti wapedza RHCE Rapid Track Course kana vanhu vakapedza System Administration I, II, uye III.
Saka kuti apedzise RHCE chiziviso, mumwe anofanira kutora awa 3.5 RHCE Exam (EX300) achiona Linux 7. Pamusana pekuda kwekuti RHCE yakasimbiswa inoda kugadzirisa kana kuti pane mikana yokuti mumwe munhu anofarira kupinda muchikwata che-lab-based asati atora kuongorora kweRHCE, unofanira kuenda kuRHCE Certification lab (RH299). Iyi iri zuva rechina rakagadzikana rakarongedzwa nemudzidzisi umo iwe unowana kupumhidzira kushanda kuburikidza nemumwe wemakiti kubva kuRavers Hat System Administration I, II uye III dzidzo, pamwe neRa Rapid Track course.
Sezvakaratidzwa Red Hat, senhau yekukosha kwekutanga chero RHCE ingadai ine zvazvinotora muRHCSA yakavimbisa kuti inoziva. Kunyange zvakadaro, ivo vaizova nekwanisi yekugadzirisa chikamu nguva yekugadzirisa; kuronga zvidzidzo zvepamusoro, bundle kuparadzanisa, uye kuronga dudziro kududzirwa; kusika uye kutumira kunopa nhoroondo yekushandiswa kwemamiriro; kugadzirwa kwemaitiro ekugadzira matanda, kusanganisira kubhururuka kure kure; kuronga a (iSCSI) initiator; shandisa shell scripting kuti mechanize masangano ekutsigira mabasa uye kugadzira hurongwa hwekupa hurumende sangano seHTTP / HTTPS, FTP, NFS, SMB nezvimwe zvakadaro.
Pakati pemitsara iyi, mumwe anofanira kunge ari RHCSA akachengetedzwa asati agamuchira RHCE kuti RHCSA chiziviso uye RHCSA dzidzo dzekudzidzisa dzinorongedzerwa pakuvaka chikonzero chekwanisi chinotarisirwa kushanda zvose Red Hat zvinhu. Kuwana RHCE kusimbiswa kunoratidzira zvinoshamisa zvinogona kuitwa nemigumisiro uye industry inobvuma. Pasinei nokuti iwe, iwe unofanira kutora mushure mekuita tsanangudzo yakataurwa pamusoro apa neRud Hat kuti uwane chiziviso. Iwe unofanirwa kudarika zvidzidzo zvishomanana kuti uwedzere iwe pachako uchichengetedza mupfungwa mupfungwa yekupedzisira kuti utore kuongorora RHCE chiyeuchidzo.